ISamsung Gear VR entsha izoba nomyalo ozohlanganiswa nezibuko | Izindaba zamagajethi
ISamsung Gear VR entsha izoba nesilawuli kude esizohlanganiswa nezibuko
Iqiniso langempela lafika ngonyaka odlule ukuhlala, noma okungenani lokho kubonakala kungenxa yesithakazelo abakhiqizi abasibonisayo kulobu buchwepheshe. Njengamanje emakethe abakhiqizi abaningi basinikeza izibuko ze-VR, izibuko zokuzibiza ngandlela thile, lapho singaxhuma khona i-smartphone yethu ukujabulela amavidiyo angama-360-degree, ngoba ukudlala, okushiwo ukuthi kuyadlala, Kuyinkimbinkimbi kakhulu uma singenawo umyalo osivumela ukuthi siwenze. Amaphupho emini kaGoogle abe ngawokuqala ukuwafaka, kepha kubukeka sengathi ngeke kube kuphela, ngoba isizukulwane esilandelayo seGear VR yakwaSamsung naso sisinikeza irimothi yokulawula kokubili ukudlala kwamavidiyo nemidlalo ehambisana nakho ubuchwepheshe.
Ngokwezithombe ezitholwe ngabezindaba ezikhethekile kwaSamsung, iSammobile, isizukulwane esilandelayo seGear VR enkampanini yaseKorea zizohlanganisa ukulawula esizokwazi ukulawula ngakho kokubili ukukhiqizwa kwamavidiyo okufana nethuba lokukwazi ukujabulela imidlalo eyenzelwe lolu hlobo lokuqukethwe. Le rimothi entsha, ebizwa yinkampani njengeVR SM-R324, izoxhuma nge-bluetooth kule divayisi futhi ingaxhunywa ezingilazini ukuze ikwazi ukuyigcina iphephile.
Njengoba sibona esithombeni esihola le ndatshana, irimothi izosinika induku ye-analog kanye nezinkinobho zezenzo ezi-4. Asazi ukuthi inkampani yaseKorea ihlose ukwethula uhlobo oluthile lwenzwa efana ne-gyroscope noma i-accelerometer ngaphakathi kwayo, into engaba ngumqondo omuhle kakhulu. Okwamanje asinalo ulwazi oluthe xaxa ngayo, ngaphandle kokuthi izosebenzisana ne-Galaxy S8 kuphela, ngakho-ke kungenzeka ukuthi lesi sizukulwane esisha seGear VR sizokwethula ngoMashi 29 ozayo nge-S8 eNew York.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Ubuchwepheshe » Iqiniso langempela » ISamsung Gear VR entsha izoba nesilawuli kude esizohlanganiswa nezibuko
Izinjini ezinkulu zizosusa amawebhusayithi wesifufula emiphumeleni yawo
Usebenza kanjani umsebenzi omusha we-WhatsApp "statuses"